Muviri, Moyo neMweya -- Izvi zvinorevei?
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Muviri, Moyo neMweya -- Izvi zvinorevei?
65-0815 ASI HAVANA KUZIVA
Uye haungaratidzwi usiri pamitumbi mitatu sezvauri, ndizvo: muviri, mweya nemoyo. Pakashaikwa chimwechete chazvo, unenge usina kukwanira. Mazviona? Dai maive musina moyo mungadai musiri chinhu; dai maive musina mweya, mungadai musiri chinhu; dai musina muviri, mungadai mungori mweya, kwete muviri.
Tarisai pano. Mune pfungwa shanu dzinowadzana nemuviri wekunze. Mwari akakupai pfungwa shanu; kwete kuti muwadzane naye, asi musha wenyu wepanyika pano, kuona, kuraira, kubata, kunhuwidza nekunzwa.
Zvino mune mweya mukati, une zvikamu zvishanu: kuzvidzora rudo nezvimwe zvakadaro. Zvikamu zvishanu zvamunoshandisa kuwadzana nenzvimbo yemweya, asi nemweya wenyu. Nyama yenyu inowadzana nezvenyama. Mweya yenyu inowadzana nezvemweya. Asi mukati mazvo mune moyo, moyo kana mweya wemukati iwoyo ijini rakabva kuna Mwari.
65-1126 MABASA NDIKO KUTENDA KUNENGE KUCHIRATIDZIRWA
Asi kana zvichibva mukati, zvinobatanidza zvimwe zvacho zvese pamwechete. Ndiwo munongedzo. Ndicho chikwangwani, mukati memukati. Moyo kana mweya wemukati unotonga mweya wehupenyu mweya uchitonga muviri.
I VATESARONIKA 5:23 Mwari worugare amene ngaakuitei vatsvene kwazvo; mweya wenyu, nomoyo, nomuviri, zvichengetwe kwazvo, zvisina zvazvingapomerwa pakuuya kwaShe wedu Jesu Kristu.
Vhesi iri rinotsanangurwa nemakereke mazhinji serinomiririra hurongwa hwezvitatu izvi panyama.
Muviri kunze. Moyo unopa muviri hupenyu uri mukati memuviri. Mweya uri mukati memoyo inova nzvimbo yemukati kati inobva kurudziro.
Tsananguro iyi inoita kuti mweya uve chinhu chakakosha kana chemukati kati memunhu.
MATEO 16:26 Nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana nyika yose, akarashikirwa novupenyu bwake? Kana munhu ucharipeiko kuti adzikinurwe vupenyu bwake?
Vhesi iri rinoburitsa pachena kuti moyo (mweya wemukati) ndiwo chinhu chakakoshesesa chiri pamunhu.
Kuturikira uku kunoitawo kuti maKristu atende mukurarama muhupenyu hwavanodaidza kuti “soulish’. Izwi rekuti “Soulish” iri harimo muMagwaro. Vanoona moyo sehupenyu huri mumuviri memunhu.
Kutsanangura zvatinotenda nemazwi asimo muMagwaro zvinoreva kuti tiri kutokanganisa.
Asi mhuka dzine mweya wehupenyu madziri.
Chero munhu akamboita mhuka yaanochengeta anoziva kuti mhuka ine hupenyu hwayo hunoburitsa pachena hunhu hwayo.
MUPARIDZI 3:21 Ndiyani ungaziva kana mweya wemunhu uchikwira kumusoro, kana mweya wemhuka uchiburuka pasi kunyika?
Mhuka dzine mweyawo unova hupenyu hwadzo. Asi mhuka hadzina zvivi saka hadzizodaviri kuna Mwari nekuda kwehupenyu hwadzo. Dzinorarama nekuda kwekusikwa kuri madziri. Mweya wadzo unorasirwa kumarara kana dzafa.
EZEKIERI 18:4 Mweya unotadza uchafa.
Zvivi zvinoyanana nemoyo yevanhu mweya wemukati kana ndangariro. Saka mweya wemukati kana ndangariro kana moyo une kodzero dzekuita kuda kwemunhu mumwe nemumwe, simba resarudzo. Chiprofita ichi chakapihwa pamusoro paJesu achiuya semuprofita.
DEUTERONOMIO 18:18 Ndichavamutsira muprofita, unobva pakati pehama dzavo, wakafanana newe; ndichaisa maShoko angu mumuromo make, iye uchavavudza zvose zvandinomuraira.
19 Zvino munhu upi noupi usingatereri mashoko angu, aachataura muzita rangu , ndichamubvunza pamusoro paizvozvo.
Kuda kwedu ndiwo musiwo unoenda kumoyo. Tinokwanisa kusarudza kutenda Shoko raJesu kana kukakavara toshaiwa kutenda muShoko rake.
Moyo wemunhu ndiwo unotipa simba rekutenda kuShoko raMwari, Bhaibheri.
Ngatitarisei zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro ‘peHupenyu” uyezve “ndangariro”.
VAROMA 8:10 Kana Kristu ari mukati menyu, muviri wakafa nekuda kwezvivi; asi mweya mupenyu nokuda kwokururama.
Hupenyu huri mune chero munhu anorarama kana mhuka ndiwo mweya wehupenyu.
ISAYA 38:16 Ishe, vanhu vanorarama nezvinhu izvozvi; vupenyu bwose bwomweya wangu bwuri mazviri;
Mweya wehupenyu hwevanhu unozoenda kumusoro kuna Mwari kuchigaro chake cheKutonga kunodavira maererano nesarudzo dzekuda kwavo dzavakaita vachirarama.
VAROMA 8:27 Uyo unonzvera moyo, ndiye unoziva kufunga kwomoyo,
VAEFESO 4:23 Muvandudzwe mumweya wokurangarira kwenyu.
Bhaibheri rinoshandisa kutaura kwekuti “kufunga kwemoyo” uye “mweya wokurangarira”. Saka hapana musiyano pakati pemweya nendangariro. Mweya paunoshanda mupfungwa dzenyu ndiko kufunga kana kurangarira.
VAROMA 8:2 Nokuti murairo weMweya wovupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura.
II VAKORINTE 3:6 :Nokuti zvakanyorwa zvinovuraya, asi Mweya unopa hupenyu.
Mavhesi aya anoyananisa hupenyu nemweya zviri pachena.
Ngatitarisei zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pehurongwa hwezvepanyama hwemuviri moyo nemweya.
I SAMUERI 25:29 Kunyange munhu akasimuka kukudzingirirai, nokutsvaka kukuvurayai, mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu vari kuna JEHOVA.
Chakaputirwa mumweya ndiwo moyo kana mweya wemukati.
MAPISAREMA 66:9 Iye unopa mweya yedu hupenyu.
Moyo wemunhu haugoni kurarama pachawo unofainra kubatwa muhupenyu huri mumweya wehupenyu.
JOBO 14:22 Asi kana ari iye nyama yake inorwadziwa, mweya wake unochema mukati make.
“Iye” anofanira aireva “mweya” sezvo munhu akaitwa nemuviri wenyama, moyo kana kuti mweya wemukati, nemweya.
Mweya wenyu unobereka zvinhu zvakanakisa zvemweya pamusoro pehunhu hwenyu. Hunhu hwenyu hunokutsanangurai muri munhu akasiyana nevamwe.
Mweya wenyu wehupenyu une muviri wenyu wenyama pamusoro pawo kunze unogonesa mweya wenyu kuyanana nenyika yekunze. Mukati-kati memweya wenyu mune mweya wemukati kana moyo unokugonesai kuyanana nenzvimbo yepamusoro-soro yeDenga naMwari.
Hurongwa hweBhaibheri pazvitatu izvi hunoti muviri, mweya nemoyo, mweya wemukati kana ndangariro.
Saka Bhaibheri rinorevei kana richitaura pamusoro pemweya, moyo nemuviri.
VAHEBERU 10:39 Zvino isu hatizi ivo vokudzokera shure, kuti tiparadzwe, asi tiri vokutenda kuti tiponeswe mweya.
Moyo kana mweya wemukati wemunhu unowadzana nekutenda kuBhaibheri uye kuruponeso. Mhuka hadzitende munaMwari. Dzinorarama nekuda kwakasikwa kuri madziri. Mhuka hadzitadzi, saka hadzingaponeswe kubva kuzvivi.
ISAYA 53:10 Asi kwaive kuda kwaJehova kuti arwadziwe; wakamurwarisa, kana mweya wake wauya nechipiriso chezvivi,
Chinhu chaive chakakosha paCalvari waive Mweya waJesu wemukati kana moyo wake.
Mweya wake wemukati kana moyo ndiwo waive chipiriso chakaponesa mweya yedu kana moyo yedu.
Akava Hama Mudzikinuri, Munhu akaita sesu, asina zvivi.
I VATESARONIKA 5:23 Mwari worugare amene ngaakuitei vatsvene kwazvo; Mweya wenyu, nomoyo, nomuviri, zvichengetwe kwazvo, zvisina zvazvingapomerwa pakuuya kwaShe wedu JesuKristu.
Chinhu chechipiri chingagoneka ndechekuti vhesi iri rinomiririra hurongwa hunoshanda nezvinhu. Chekutanga mweya unotongerwa zvivi.
Chechipiri, mweya wemukati kana moyo unokura pakutenda kuti utende Shoko raMwari.
Zvino muviri unobva wazvininipisa kuShoko raMwari.
Mweya ndiwo unoyananiswa nezvivi.
EZEKIERI 18:4 Mweya unotadza, uchafa.
ISAYA 53:10 Asi kwaive kuda kwaJEHOVA kuti arwadziwe; wakamurwarisa: kana mweya wake wavuya nechipiriso chezvivi,
MIKA 6:7 Ko JEHOVA ungafadzwa namakondobwe ane churu chezana, kana nenzizi dzamafuta dzine zvuru zvinegumi here? Ndingamuvigira dangwe rangu pamusoro pokudarika kwangu, icho chibereko chomuviri wangu, pamusoro pezvivi zvomweya wangu here?
MAPISAREMA 49:15 Asi Mwari uchadzikinura mweya wangu pasimba reSheori.
MAPISAREMA 49:8 (Nokuti rudzikinuro rwemweya yavo runokosha, runofanira kuregwa nokusingaperi:)
Jesu akaripira rudzikinuro rwemweya yedu paCalvari. Iri raive basa rakapedziswa. Rudzikinuro rwemweya rwakataurwa muzvinhu zvakadarika, tinofanira kungoziva chinhu ichi.
Hakuna chinogona kuitwa nemunhu nhasi kuti aponese mweya wake.
VAHEBERU 9:12 Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo, kamwe chete, zvikapera, panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro rusingaperi.
Rudzikinuro rusingaperi. Mwari akagara anezano rake redzikinuro mundangariro dzake. Ndangariro chikamu chemweya uye Mwari ndiMweya. Kudzokera kusvika mavambo asati avapo aive agara achiziva vaizomunamata nevaizotenda Shoko rake.
ZVAKAZARURWA 17:8 Chikara chawavona chaivapo, hachichipo; chodo-kukwira chichibva mugomba rakadzika-dzika kundoparadzwa; vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo muBhuku yovupenyu kubva pakusikwa kwenyika, vachashamiswa kana vachiona chikara, kuti chaiva’po; hachichi’po vuye chichazova’po.
Saka kudzikinurwa kwemweya kwakataurwa muzvakadarika. Zano iri raive ragara riri muNdangariro dzaMwari. Jesu akabva auya akasvikoripira muripo wekutenga mweya yedu. Asi kuita kukuru uku kwaive kwagara kuri muNdangariro dzaMwari. Paive pasina chinhu chitsva. Asi kuzadziswa chete kweNdangariro dzaMwari dzaive dzabvira kumashure kwazvo.
Rudzikinuro rwemuviri rwakataurwa mune zvichauya.
VAROMA 8:23 Zvisati zviri izvo bedzi, asi nesu vo, kunyange tine zvibereko zvekutanga zvoMweya, nesu timene tinogomera mukati medu, tichimirira kuitwa kwedu vana, ndiko kudzikinurwa kwomuviri wedu.
Pamusi wekumutswa kwevakafa, vakafa munaKristu vachamutswa mumiviri yokubwinya isingazotadzi. Apa ndipo pachadzikinurwa miviri yavo.
VAFIRIPI 3:21 Uyo uchavandudza muviri wokuninipiswa kwedu, kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogona vo naro kuzviisira zvose pasi pake.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira; nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora; nesu tichashandurwa;
Kudzikinurwa kwezvivi zvedu kwakaripirwa paCalvari paKuuya kwake kwekutanga. Pakumuka kwevakafa kuchauya Kuuya kwake kwechipiri kwava pedyo kusvika, rudzikinuro rwemiviri yedu ruchaitika patinoshandurwa kupihwa miviri yokubwinya.
Pakati peKuuya kwekutanga neKuuya kwechipiri kwaJesu Kristu, Mweya Mutsvene unotungamirira kereke ichipinda muchokwadi chenguva yayo.
Bhaibheri haritauri pamusoro “perudzikinuro rwemweya wekufema ”.
Saka mweya unoita basa rei muzano raMwari reruponeso?
Mweya wemunhu wekufema hauna chaunoita zvachose. Unongofanira kufa.
I VAKORINTE 15:31 Ndinofa zuva rimwe nerimwe.
Mweya Mutsvene unobata basa guru muhupenyu hwevatendi pakati perudzikinuro rwemweya paCalvari nerudzikinuro rwemiviri pachamutswa vakafa munguva inotevera.
VAEFESO 1:13 Munaiye, nemi vo, makanzwa Shoko rezvokwadi maari, iyo Evangeri yokuponeswa kwenyu; munaiye, wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa.
14 Ruri rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe.
Kuti rubatso zvinorevei?
Zvinoreva kuti muripo wekubatira chinhu kusvikira musi unouya munhu iyeye anenge aripira kuzochitora.
Muripo wekubatira unosimbisa kuti muTengi mumwe, Jesu, anogona kutitora ndewei?
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Mweya Mutsvene ndiwo Munhu wepakati ari pakati pezviitiko zvikuru zviviri. Kuuya kwekutanga kuzodzikinura mweya kubva kuzvivi uye Kuuya kwechipiri kuzodzikinura miviri yedu.
Mweya Mutsvene uri muMwenga waKristu unomutungamirira kuchokwadi chakazara chinozomugonesa kugadzirira Kuuya kwaShe Jesu.
Tarisai, hakuna rudzikinuro rwemweya wekufema. Nei kusina?
Mweya wedu wehupenyu watinofema unofanira kufa. Musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa saka une midzi ine chefu.
Mweya wedu wevanhu wekufema nofanira kufa kuitira kuti utsiviwe neMweya Mutsvene.
VAKOROSE 3:3 Nokuti makafa, vupenyu bwenyu bwakavigwa pamwechete naKristu munaMwari.
Kuzvarwa patsva kunobva pamweya wedu wevanhu wekare, nekusikwa kwawo kwezvakanaka nezvakaipa, kufa nekutsiviwa nechidimbu cheMweya Mutsvene waMwari.
Kutenda muna Kristu neBhaibheri ndidzo nheyo dzekuzvarwa patsva.
Kusatenda ndicho chivi chikuru. Zvese zvatinotadza zvingori zvibereko zvekushaiwa kutenda.
JOHANE 8:24 Naizvozvo ndinoti kwamuri: muchafira muzvivi zvenyu, nokuti kana musinganditendi kuti ndini Iye, muchafira muzvivi zvenyu.
VAHEBERU 10:39 Zvino isu hatizi ivo vokudzokera shure, kuti tiparadzwe; asi tiri vokutenda kuti tiponeswe mweya.
Nzvimbo huru yemweya ndeyekuti unotitendera kutenda kana tichida kutenda.
ZVAKAZARURWA 22:17 Mweya nomwenga vanoti: Vuyai! Naiye unonzwa ngaati: Vuyai! Une nyota ngaavuye. Unoda ngaatore mvura yovupenyu asingatengi.
Nomwe chiverengo chekuzadzisa. Mazuva manomwe anoita vhiki. Asi munhu akaitwa pazuva rechitanhatu. Saka haana kuzara. Pane chisipo paari. Tine nzvimbo isina chinhu yatingadaidza kuti vhakiyumu, kusazara kuri muhupenyu hwedu kwatinoramba tichiedza kuzadzisa nezvinhu zvenyama uye mazano evanhu. Mweya yedu yevanhu isina zororo haifi yakagutsikana.
Mushonga wechirwere ichi unobva muBhaibheri kutendeuka mobapatidzwa.
Mweya wakatendeuka paunogamuchira Jesu Kristu seMuponesi wake, Mwari anoisa chidimbu chiduku cheMweya Mutsvene wake mumunhu iyeye. Mweya Mutsvene ndiwo Wega unogona kuzadzisa nzvimbo isina chinhu yakatenderedza mweya wemunhu. Huvepo hweMweya Mutsvene mumunhu hunobva hwazivisa hunhu hwerima hwemweya wemunhu uye munhu iyeye anenge aponeswa anobva aziva kwazvo hunhu hwake hwekutadza.
Mweya Mutsvene unotiranga nekuda kwezvivi. Mweya wedu wevanhu wataifunga kuti “tiri kurarama” wakuziviswa kwatiri sehupenyu hwerima hwerufu pamweya.
Munhu akaitwa mumufananidzo waMwari. Saka Mwari ane hunhu hwevanhu chinova chikonzero nei akauya pasi panyika ari Munhu, Jesu Kristu. Saka Mweya Mutsvene une hunhu hwemweya unoshamisa uyezve hunhu hwevanhu hwaidiwa naMwari pakutanga kuti vanhu vaite.
Mweya Mutsvene unotiita vanhu vanodiwa naMwari kuti tive. Kana hunhu hwedu hwekare hwafa.
VAFIRIPI 2:5 Ivai nomoyo uyo, wakanga uri munaKristu Jesu vo;
VAROMA 12:2 Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu,
Kukura munyasha kunoreva kuti humunhu hwaMwari hunenge huchikura matiri apo hunhu hwedu hwekare hunenge huchifa.
Nhanho yepiri hutsvene apo Mweya Mutsvene unobvisa pfungwa dzedu dzezvivi uye hunhu hwezvivi.
Kuipa kuri muhunhu hwedu hwevanhu hwakazara zvivi kunosvibisa zvinangwa zvedu zvatinazvo zvekuti tinoshaiwa chakanaka chatinoburitsa mukuedza kwedu nesimba redu. Vutera, kuzviunganidzira nekuzviwanira, uye makaro ndizvo zvinotikurudzira kuva nehuwori.
VAROMA 7:18 Nokuti ndinoziva kuti mukati mangu, imomunyama yangu, hamugari chinhu chakanaka, nokuti kuda kuri’po kwandiri, asi kuita zvakanaka haku’po.
19 Nokuti zvakanaka, zvandinoda, handizviiti, asi zvakaipa, zvandisingadi, ndizvo zvandinoita.
VAROMA 6:6 Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwechete naye, kuti muviri wezvivi ushaiwe simba, tirege kuzova varanda vezvivi.
8 Zvino kana takafa pamwe chete naKristu, tinotenda kuti tichararamawo pamwe chete naye.
Kutenda munaJesu nezvakanyorwa muBhaibheri kunotigonesa kukurira zvivi. Kuedza kwedu kuti tive vanhu vakanaka zvichibva pasimba redu hakuna maturo. Chikamu chehunhu hwemunhu hwaKristu chinofanira kutora hupenyu hwedu chotonga mifungo yedu nekuita kwedu. Ipapo chete ndipo patinozokwanisa kuva vanhu vaidiwa naMwari kuti tive.
Asi tinofanira kufa kuzvivi zvedu Jesu asati atidzikinura kubva kuzvivi.
VAROMA 7:22 Nokuti ndinofarira murairo waMwari nomunhu womukati,
Mweya Mutsvene waive munaPauro waive nehunhu hwemunhu aive munhurume.
VAROMA 7:23 Asi ndinovona mumwe murairo pamitezo yangu, unorwa nomurairo womurangariro wangu, unonditapira kumurairo wezvivi uri pamitezo yangu.
24 Ndiri munhu uri pakutambudzika! Ndianiko uchandisunungura pamuviri worufu urwu?
Asi Pauro aivewo nehunhu hwake hwakare maari hwaive hwamusvitsa pakuuraya chero Stefani.
VAROMA 7:25 Mwari ngaavongwe, naJesu Kristu, Ishe wedu. Naizvozvo nomurangariro ndinobatira Mwari, asi nenyama murairo wezvivi.
Kana taponeswa Mweya Mutsvene nemweya wedu wevanhu zvinorwa mukati medu sembwa mbiri.
Mweya Mutsvene unodya paShoko raMwari chete.
Mabasa edu, mumuviri wedu wakazara zvivi, haafi akasvika pahwaro hwaMwari. Asi mundangariro dzedu tinogona kutenda Shoko raMwari. Kutenda munaKristu, nekuramba hupenyu hwedu kwaari inova kiyi yebudiriro. Patinofa kuzvivi kana kumunhu wekare, ipapo ndipo panomuka hupenyu hwaKristu matiri hwotiita vapenyu. Anoda kutonga kwakazara mundangariro dzedu nemukuita kwedu.
Patinofa kumunhu wekare wataive, Mweya waKristu, Mweya Mutsvene, unobva watora kutonga kukuru muhupenyu hwedu.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo patinozviramba nekupa hupenyu hwedu sechipo kuna J esu Kristu neBhaibheri.
Humbowo hwerubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiro simba raMwari rekukutungamirirai muchokwadi chese.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose.
Kana ndangariro dzedu dzatanga kuzvininipisa kuhutungamiri hwaMwari anotitungamirira muchokwadi chese chiri muBhaibheri chinoshanda kuzuva redu renguva yekupedzisira.
Zvisinei, hatigoni kuuraya munhu wekare matiri zvakazara, humwe hunhu hwedu hwekare hunogona kuramba huchirarama. “hunhu hwedu hwekare uhu”ndiye muvengi wedu mukuru.
Kubata kukuru kuna Satani pamusoro pedu ndiro simba rake rekugona kutinyengera.
MATEO 24:24 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema, navaprofita venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira, vatsause navasanangurwa vo.
Mweya Mutsvene unotitungamirira kune zvinotaurwa neMagwaro akanyorwa muBhaibheri.
Kunyengera kunouya nenzira zhinji kwazvo, asi hapana kana imwe pane nzira idzodzo inogona kurondwa ikawanikwa mumavhesi eBhaibheri ichibva pavhesi kuenda pane rimwe vhesi patinoverenga tichitevera Bhaibheri.
“Zvakanyorwa zvichinzi” ndiwo wega unozova musiyano pakati pechokwadi nekunyengera.
Tichitungamirirwa kubva paGwaro kuenda pane rimwe Gwaro, Mweya Mutsvene unotisimbisa kubva pakutadza kunokwanisa chete kupindira nenzira dzemazano asimo muMagwaro.
Saka Mweya Mutsvene waMwari paunopinda mumunhu, unounza hunhu hwemunhu akarurama mumunhu iyeye hwaive hwagara huchidiwa naMwari kuti aite.
Humunhu hweMweya Mutsvene hunogona kukuitai munhu aidiwa kuti muve naMwari. Ipapo chete ndipo pamunozokwana muzano rake rakarurama.
Ropa raJesu nekutenda Shoko rakanyorwa zvinotiita kuti tisimbe nekusingaperi.
Hakuna mumwe muripo wezvivi unodarika Ropa raJesu. Hakuna kumwe kudzivirirwa kuzvivi kunodarika Bhaibheri.
Kuda kwedu ndiwo wega musiwo wekupinda mumoyo wemunhu kana mumweya wemukati nendangariro dzake. Asi kuda kwemunhu hakugoni kugara neBhaibheri zvakazara, kunyanya kana zvinhu zvikaenda nenzira isiyo kuda kuzviraramisa kukazadza ndangariro dzedu.
Kuda kwedu ndiye muvengi wedu mukuru.
Kudzokera shure kunoreva kuti hunhu hwedu hwevanhu hunokura pakutiudza zvekuita zvizhinji muhupenyu hwedu. Mweya Mutsvene uri matiri unotambudzwa sezvo usina zvizhinji zvekutaura pamusoro pehupenyu hwedu nekuda kwekuita kwedu kuda kwedu.
Nekuda kwekuti kuda kwedu kunotitungamirira munzira yakaipa uye tinodawo kufadza Mwari, tariro yedu ipapo inenge iri pakuramba kuda kwedu kuna Mwari tokupa sechipiriso izvi tinozviita nekuda kwekusarudza kwedu.
Kusarudza kupa kuda kwedu kuna Mwari zvisina kumanikidzwa ndicho chipiriso chechokwadi chega chatinogona kupa.
Nguva yangu, chipo changu, zvinhu zvenyama nepfuma zvese zvakapihwa kwandiri naMwari kubvira pekutanga. Saka ndinenge ndichingomupa zvinhu zvaakandipa. Hapana chipo chinoshamisira ipapo.
Asi kana Kuda kwaMwari kukatsiva kuda kwedu semusiwo wekupinda mumoyo kana mumweya wangu wemukati, ipapo chete ndipo panogona kuzadzwa moyo wangu nekutenda kuna Mwari.
Kutenda hakusi kwangu, chibereko cheMweya. Zvakadaro chipo chaMwari.
VAEFESO 2:8 Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda, izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari:
Nyasha zvinoreva kuti taive tisina kufanira kuponeswa uye hatitokwanisi kuzviwanira ruponeso nemabasa edu akanaka.
Ruponeso runouya nekuda kwemabasa akanaka uye chipiriso chaJesu.
VAGARATIA 5:22 Zvino chibereko cheMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka.
Tine mamwe maonero atingaite moyo kana mweya wemukati kana ndangariro. Wakafanana nemunda unodyarwa mbeu.
JEREMIA 31:12 mweya wavo uchava somunda wakadiridza,
Kana mbeu dzadyarwa, munda unofanira kudiridzwa, mucherechedzo weMweya Mutsvene.
JOHANE 7:38 Unotenda kwandiri, sezvakarebwa noRugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.
39 (Asi izvi wakareva zvomweya),
Mvura inounza hupenyu panyika yakawomerwa.
Mweya Mutsvene, uchibata semvura, unogona chete kupa hupenyu kumbeu yakadyarwa mumunda, mucherechedzo wemoyo.
Saka zvinhu zvese zvinozobva pambeu yakadyarwa mumoyo yedu.
Tinosarudza pakati pekutenda Shoko raMwari kana mbeu yekunyengera inova huchenjeri hwevanhu.
Asi mbeu inofanira kufa isati yatungira.
Saka tinofanira kufa kuzvido zvedu zvenyama tisati tava vanorarama muMweya Mutsvene.
I VAKORINTE 15:36 Iwe benzi, icho chaunodzvara hachimeri, kana chisingafi.
37 Chaunodzvara, haudzvari muviri uchava’po, asi tsanga bedzi, kana yamapfunde, kana yezvimwe.
Kana tiine mbeu yeShoko mumoyo yedu, nhanho yekutanga kudiridzira Mbeu yeShoko iyoyo nekutenda muMweya Mutsvene.
Mweya Mutsvene unobereka kutenda muShoko raMwari. Mbeu yeShoko iyi inotanga kukura yobereka muviri weShoko nekuunza miviri yedu pakuzvininipisa kuShoko raMwari apo tinotanga kurarama hupenyu hutsvene hwakadzikama.
Midzi inokura ichidzika pasi mucherechedzo wekukura nekunzwisisa kwakadzama muShoko raMwari. Izvi zvinosimbisa muti kuitira kuti mashizha awo akure akatarisa mudenga “mumhepo” yeMweya Mutsvene apo anofamba achitenderera nenyika.
VAROMA 1:20 Nekuti kubvira pakusikwa kwenyika, izvo zvake zvisingavonekwi, iro simba rake risingaperi, novuMwari bwake, zvinovonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa; kuti varege kuva nepembedzo.
Kuzvarwa patsva kunotevera nzira imwechete seyembeu yemuti.
Pakutanga, mbeu inodiridzirwa. Mbeu yotanga kukura. Kana mbeu yakura inobereka muviri unoenderana nehupenyu huri mumbeu.
Mudzi mukuru wepakati mucherechedzo waKristu. Iye ega anogona kutiita kuti tikure tisimbe muShoko raMwari.
Takafanana nemidzi yemumativi inowana mvura kubva pamudzi mukuru wepakati.
Mweya unobatsira kana kupa hupenyu kuMbeu yeShoko iri mumoyo. Saka Mweya ndiwo unotanga, kwouya moyo.
Zvino Mbeu yeShoko inenge ichikura inobereka muviri wakafanira unorarama hupenyu hutsvene uchiterera Shoko raMwari. Saka hurongwa hwacho hunoti mweya moyo popedzisira nemuviri.
ISAYA 26:9 Ndakakushuvai nomweya wangu vusiku; zvirokwazvo ndichakutsvakai zvikuru nomweya wangu uri mukati mangu:
Shuviro dzemukati kati dzekuva vakarurama pamberi paMwari dzinobva paMbeu yeShoko iri mumoyo. Mweya Mutsvene unobereka nzira apo tinokura munyasha tichizvininipisa kuShoko raMwari. Pakupedzisira, miviri yedu inobva yauyawo pakuzvininipisa kuMagwaro.
JOHANE 3:3 Jesu akapidura, akati kwaari: zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi kutsva; haangavoni vushe bwaMwari.
4 Nikodimo akati kwaari: Munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri, akaberekwa here?
5 Jesu akapindura, akati: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: kana munhu asingaberekwi nemvura noMweya, haangagoni kupinda muvushe bwaMwari.
Mvura inotaura pamusoro pemvura dzeShoko. Shuviro dzekusuka hupenyu hwedu kuti tichene kupfurikidza Magwaro.
Mweya Mutsvene wega ndiwo unogona kuita izvi sezvo uchikwanisa kuwana simba rekutonga ndangariro dzedu.
Saka tinozvarwa patsva kana miviri yedu nendangariro dzedu zvatanga kurarama mukuzvininipisa kuShoko raMwari.
Pfungwa dzedu ina padzishanu dzatinadzo dzinofambidzana nemusoro wedu. Izvi zvinotigonesa kuwadzana nenharaunda yedu. Pfungwa idzi dzinoti kuona, kunzwa kufemhedza nekuraira.
Pfungwa yekubata. Iyi ipfungwa inobata zvinhu zvizhinji. Tinokwanisa kufunga tichibata tichinzwa kuti chinhu chatakabata chii. Tinonzwawo kupisa kana kutonhora uye mamiriro echinhu kuti chakaitwa nei.
VAROMA 1:20 Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, izvo vake zvisingavonekwi, iro simba rake risingaperi, novuMwari bwake zvinovonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa,
Ndangariro dzemunhu anorarama hadzionekwe nekuti mweya. Hatigoni kuona mweya.
Asi kana kune pfungwa huru shanu pamuviri, kunoitawo pfungwa huru shanu dzemweya dzinobatsira kutsanangura hunhu hwedu. Izvi zvese zvikamu zvendangariro dzemunhu dzisina anonzwisisa masikirwo adzo.
Kuona munyika yezvenyama kunoratidza kuti tine murangariro wekuona zvinhu mundangariro dzedu.
Kunzwa kunoyananiswa nekurangarira kwedu.
Pfungwa yedu yekubata kana kugona kunzvera chinhu kupfurikidza kuchibata zvinoratidza kuti tinekunzwa kwepfunga kana kwemoyo.
Kuraira nerurimi kunoyananiswa nekufunga apo patinosarudza kana tichifarira chinhu chacho kana kwete. Tinokwanisa kubva “tamedza” pfungwa iyoyo kana kuti “kuisvipa”.
Pfungwa yekunhuwidza ndiyo pfungwa yemunhu isingadi kutambwa nayo nekuti yakapinza kwazvo. Zvinhu zvishoma shoma zvechikafu chakatsva kana munhuwi wemafuta unokwanisa kunzwikwa zviri nyore nemhuno dzemunhu. Izvi zvinoratidza kuti tine manzwiro anoshanda seyambiro pakutanga kana takuda kutanga kuita chinhu chakaipa. Uyu ndiye mupurisa wedu wemweya watinofanira kuterera.
Zvikamu zvishanu zvemweya wendangariro dzedu zvinotongwa neshuviro dzinobva mumoyo yedu. Kubva pakuda kwedu tinoshuvira kugara tichitevera Magwaro kana kusatevera Magwaro. Shuviro idzi dzinobva dzaburitsa pachena nzira yatinotenda nayo kana kufunga nekuita zvinhu.